China Shopping Cart DG1026 / DG1027 inogadzira uye mutengesi | Duoduo
Shopping Cart DG1026 / DG1027
Ita Nha .:DG1026
Yakavhurwa Ukuru: 50x52x96CM
Basket kukura: 36x38x51CM
Package: 4pcs pakatoni
Saizi Carton: 118x46x17CM
Mavhiri Makuru: :180mm
Diki Mavhiri: Φ100mm
Ita Nha .:DG1027
Yakavhurwa Ukuru: 57x62x101CM
Basket kukura: 40x46x60CM
Package: 2pcs pakatoni
Saizi Carton: 122x54x11CM
Mavhiri Makuru: Φ240mm
Iyo ngoro yekutenga ine bhasiketi, zvinobatsira kuisa zvinhu kana iwe uri kutenga. Mune nguva inoreva, tswanda inoputirwa, inochengetedza zvikuru nzvimbo uye inounza nyore kukuru. Kune maviri mavhiri engarava kumberi kwengoro, inogona kubatsira kuti ngoro ichimhanya zvakanyanya. Iyo mubatsiri wakanaka wehupenyu hwako hwezuva nezuva.
Mafora anotenderera kuitira kuchengetedza zviri nyore mumuti uye kune imwe nzvimbo.
Collapsible dhizaini yekuchengetedza nyore; yakanakira nzvimbo diki
Kureba-inogadziriswa mubato neaputi grip yekuwedzera nyaradzo
Kuvakwa kwakabikwa kwekugara kwenguva refu
Huru-basa nyore snap-on mavhiri yakanakira vagari vemaguta, vadzidzi uye vakura
Yakanakira kutenga, kumisasa, kuwachira, kuenda kumhenderekedzo yegadheni nezvimwe
Kunyangwe iwe uri kuenda kunotenga, kugeza kana kupedza zuva riri pamhenderekedzo, iyi yakakwenenzverwa Kubatsira Ruoko kupeta ngoro nemavhiri kunoita kuti rwendo rive nyore. Iyo inorema-basa, inofamba nemavhiri matai emagetsi matiraiki zvinoita kuti zvive nyore kuifambisa, uye iyo yakakwirira-inogadziriswa mubato ne foam grip inopa yepamusoro nyaradzo. Iyo hombe yakapetwa ingoro nemavhiri uye inobata folda flat kuti ukwanise kukurumidza uye nyore kuiisa munzvimbo yekunze-yeiyo nzvimbo painenge isiri kushandiswa.
Iyo Easy Wheels Mini Shopping Cart iri yakave iyo indasitiri yekutanga ngoro ine maindasitiri simba rekushandisa imba. Paunorara pasi, uye ngoro yakaputirwa. Dhiza inopa isinganzwisisike huwandu hweyakareruka mune compact size. Iyi chaiyo modhi inouya nemavhiri echando-akatsemurwa mavhiri.
Yepfuura: Shopping Cart DG1015
Inotevera: Shopping Cart DG2035
Yakanakisisa Folding Shopping Cart
Akanakisa Ekutenga Ngoro
Folding Shopping Cart Yedu ine Swivel Wheels
Kupukuta Shopping Cart Uye Nemavhiri
Yakakora Duty Kukunonga Shopping Cart
Yakakura Shopping Cart
Mahotera Trolley CC-S3S / CC-S3L
Flat-panel ngoro HC150B / 250B